Medaly manokana nataon'i Ledonne aingam-panahy avy amin'izao rehetra izao | Famoronana an-tserasera
Tsy hijanona amin'ny fanehoan-kevitra izahay tolo-kevitra momba ny kanto sy asa tanana izay mivoaka kely amin'ny mahazatra. Fomba manokana hanalavirana ny tenanao amin'ny hafa ny fanananao zavatra ahafantarana anao. Na dia amin'izao andro izao aza dia sarotra ihany koa io noho ny fahalalahana omen'ny Internet hahafahany mahafantatra fironana vaovao raha misy mahalala hoe aiza no jerena.
Ny zavatra tsy manam-paharoa sy manokana dia mety ho medaly mitaona fanoharana kely iray izay miafina amin'ny ampahany amin'ny toetrantsika na ny toetrantsika. Ary ireo medaly dia afaka mody izany filana an'izao rehetra izao ary ny kintana rehefa mitranga amin'ireo noforonin'i Khara Ledonne, mpamorona firavaka avy any New York izay mamorona an-tanana an'io karazan-javatra io amin'ny tanana.
Ny volavolany vita tanana dia manafina ireo kintana sy fitoeran-javatra ireo faritra eo amin'izao rehetra izao azonao eritreretina amin'ny alina iray izay nanjavonan'ny volana ary ny iray dia tsy nisy tamin'io fandotoana maivana io tamin'ny toerana manokana. Izay any an-dàlana dia misy vitsy kokoa ary vitsy ireo izay mila mitondra fiara lava vao hivoaka amin'ireo tanàna ireo ka "on".
Ny Ledonne dia manala ny medaly medaly ho azy ireo fijerena ambanivohitra alohan'ny handravahana ny sary hosodoko menaka tokana. Tsy misy mitovy amin'ireo sombiny amidiny avy any Etsy ary ny haben'ny endriny dia avy amin'ny zavatra manakaiky ny tany ka hatrany amin'ny zavatra lavitra lavitra an'ireo kintana ireo izay hitantsika amin'ny alina miavaka.
Manana medaly ao amin'ny tranokalany ao amin'ny Etsy ianao, izay ahitanao ny sanganasany maromaro. Medaly medaly manokana tonga lafatra amin'ny fanomezana na ho an'izay liana amin'ny astronomia ary manana antokon-kintana na planeta manan-danja amin'ny fisiany tena ilaina izy io.
Izany dia ny Etsy anao miaraka amin'ny medaly manokana ananany. Raha mitady zavatra mitovy amin'izany ianao this entry.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Medaly bitika kely manafina an'izao rehetra izao ao anatiny